Miisaanka safayr ee Apple Watch ayaa tijaabiyay | Wararka IPhone
Ma xasuusataa sida xanta oo dhan loo soo bandhigo IPhone 6 iyo 6 Plus miyay tilmaameen in kuwani ay keenayaan shaashad safayr ah? Aniguba Niyad jabkiina markaan arkay inaysan saas ahayn, weli waan sii xasuustaa. Ugu dambeyntiina, sidaan ognahay, kuma aanan arkin raad muraayad safayr ah shaashadaha iPhones-ka cusub, laga yaabee inay rabaan inay la yaabaan Apple Watch.
Waana mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee kala duwanaanta qeexitaannada iyo qiimaha moodooyinka kala duwan ee saacadda shirkadda tufaaxu ay tahay sida saxda ah nooca noocan ah. Nooca Inta badan aasaasiga Apple WatchIsboortiga ma laha kareem safayr ah, halka labada nooc ee kale ee ka sarreeya ay ku darayaan.
Shaashadda Apple Watch waxay noqon doontaa -in aragti ahaan- u nugul kuuskuus iyo xoqid ka badan iPhone-ka, sidaa darteed mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee laga walwalo marka la helayo mid ayaa ah sida ugu wanaagsan ee muraayaddu uga hor imaanayso dhacdooyinka howlaheena maalin kasta. Tan iyo markii iPhonelaga dhigay doonaya inay xalliyaan shaki yar, sidaa darteed waxay soo saareen tijaabo iska caabin ah oo leh halbeegga 38 mm Apple Watch safayr safayr.
Haddii illaa iyo hadda wax shaki ah aan ka qabno haddii ay si fudud u xoqayso iyo in kale, fiidiyowgu shaki ugama tagayo shaki: way sii socotaa oo si aad u wanaagsan. Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la arko isbarbardhig (oo soo muuqan doona marka saacaddu ay iibiso) inta u dhexeysa shaashadda qaabka Sportiga iyo kan Apple Watch "just", halkaas oo aan hubo in faraqa u dhexeeya qiimaha labada moodel uu noqon doono caddayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sidee ayuu u adag yahay shaashadda Apple Watch? Fiidiyowgaan waxaan ku helaynaa fikrad
Kazuhira miller dijo
Waan jeclahay fiidiyowga, gaar ahaan qaybta uu madoobaado, oo iska jir! in ka badan nus. Shaqo wanaagsan, waxay muujineysaa inaad fiirisay.
Jawaab Kazuhira Miller
Farqiga u dhexeeya Sportiga iyo “bannaanka” waa £ 180, ma waxay ka dhigan tahay in Apple ay iga qaadeyso lacagtaas safayr dhiigga iyo birta ah halkii ay ka heli lahayd aluminium? Waxaan u arkaa inay xoogaa qaali tahay.
maxaa been abuur ah!
Daniel cerrillo dijo
Qiimaha ayaa ila muuqda aniga aniga, aniga oo tixgelinaya in waxyaabaha ugu adag ka dib safayrku ay yihiin dheeman.
Jawaab Daniel Cerrillo